Izwa I-European Dream: 5 Kumele Uvakashele Amazwe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhambela i-Iceland > Izwa I-European Dream: 5 Kumele Uvakashele Amazwe
Izeluleko Zokuhamba Kwezimoto, Ukuhamba Ngezitimela, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Greece, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izikhangibavakashi Europe, Ukuhambela i-Iceland
(Kugcine ukubuyekezwa On: 09/04/2021)
IYurophu yizwekazi elihola phambili maqondana ne-vibrant, kuhlalwe, namadolobha anamuhla agcwele ubumnandi. Kunenqwaba yezimangaliso zokwakha, iminyuziyamu, nezindawo zokudlela kuwo wonke amazwe aseYurophu ongazicabanga. Impilo yasebusuku kanye nezindawo zokudla kulo lonke izwekazi ziya ngemuva. Izilwane zasendle nokuheha kwemvelo kuleli zwekazi kuyamangalisa futhi kufinyeleleka kalula. Futhi ngenxa yesici se-EU kanye namanethiwekhi emigwaqo asezingeni eliphakeme ezwenikazi lonke, kulula ngabahambi bomgwaqo ukuhlola lonke izwekazi ngokushanela okukodwa. Ukuzwa iphupho laseYurophu ungasebenzisa imoto eqashisayo noma izinto zokuhamba zomphakathi.
Ngabe Uyayidinga IDP (Ilayisense Yamazwe Ngamazwe Yokushayela) Ukushayela EYurophu?
Awu, amanye amazwe afana ne-Italy adinga ukuthi abashayeli bamanye amazwe babe ne- ilayisense yokushayela yamazwe omhlaba njengobufakazi bokuqeqeshelwa ukushayela. Kuhle ukuletha ilayisense ngisho nasemazweni angayifuni ngoba ungayidinga ukuze uqinisekise ama-ejensi okuqasha izimoto namaphoyisa omgwaqo ukuthi ungumshayeli ohloniphekile. Futhi, ngaphambi kokuhamba, buza neCDC ukuqinisekisa ukuthi izindawo esixoxa ngazo lapha azithinteki kakhulu yilo bhubhane. Unalokho engqondweni, nalu uhlu lwe 5 kufanele-uvakashele amazwe aseYurophu.
Abantu abake baya eSororini bakholelwa ukuthi leli dolobha liyindawo yothando kakhulu hhayi e-Europe kuphela kodwa nasemhlabeni wonke. Kuphelele kubantu abasanda kushada abafuna i- indawo yehoneymoon. Uzothandwa ukubukwa okumangalisayo kwe-caldera nokushona kwelanga. Ungakwazi ukukhuphuka, hamba ohambweni lwesikebhe, noma ube nentambama ekhululekile emabhishi amnyama edolobha lentaba-mlilo. Uma uthanda ibhodlela, uzokuthanda ukusampula iwayini wendawo eduze kwe- IMedithera. ISantorini ingu-alngakho ekhaya kwamanye amahhotela kanokusho eGrisi.
2. Okuhlangenwe Nakho Kwephupho LaseYurophu: Lake Como, Italy
ILake Como lidume ngezinhlobonhlobo zalo ezingapheli zemizi emihle nemizana, ukudla okumnandi (Nguwe, I-pizza yase-Italy?), nezindawo ezimangalisayo zokuthwebula izithombe, konke kuxhumene nezinsizakalo zemikhumbi zansuku zonke. Uma unesikhathi namadola angeziwe ongawonga, ungaqasha isikebhe semoto bese ugibela edolobheni elincane laseBellagio. Ngezinye izindlela, ungahle uthathe uhambo lokuhambahamba noma sebenzisa i- ibhayisikili elinamandla kagesi futhi ujabulele ukubukwa okuhle wedwa. Isimo sezulu lapha siyamangaza unyaka wonke futhi ngenxa yesiko lokuhlehla lesifunda (azikho izivakashi eziningi), uthola ithuba elihle lokuphuka ekukhandlekeni nasezinyangeni zempilo yakho ejwayelekile. ILake Como ibuye ibe ne-vibe yothando yokuchitha ikhefu langemva komshado.
Inhlokodolobha yase-Iceland iReykjavik iphakathi kwamadolobha amahle kakhulu aseYurophu kubahambi, ngezizathu eziningi. Uma uthathekile ngumlando, uzongithanda iReykjavik ngeminyuziyamu yayo enhle necebile phakathi kwabo IViking Maritime Museum, i-Einar Jonsson Museum, kanye ne-Art Museum. Inhlokodolobha nayo izungezwe uhla lwezinto ezikhangayo ezimangalisayo, okwenza kube itheku lokungena elihle kakhulu lezivakashi zomhlaba wonke. Uzobona futhi uzwe amathani wezimangaliso ze-geological kufaka phakathi amaphuzu e-lava, izimpophoma, neBlue Lagoon. Amatshe, izinguzunga zeqhwa, amabhishi anesihlabathi, futhi izintaba-mlilo zichaza nezindawo zaseReykjavik.
Ngamatshe ayigugu, uzothanda ukunambitha izinhlobo ezahlukahlukene zokudla kwendabuko kwase-Iceland ezindaweni ezinjengeSushi Samba neBaejarins Beztu Pylsur. Uma uthanda izilwane zasendle zasolwandle, ungaya ekubukeni kwemikhomo ethekwini elidala likaReykjavik, home to over 20 izinhlobo ezahlukene zemikhomo. Ungabona futhi amahlengethwa, amaphaphu, futhi porpoises, phakathi kwezinye izilwane zasendle zasolwandle.
4. Izwa I-European Dream: ePrague, I-Czech Republic
Izivakashi eziningi ziyayithanda iPrague ngemicimbi yayo emangalisayo, kusukela kumibhikisho yamaholide kuya emibonweni yansuku zonke yonyaka. Eminye yemicimbi egcwele ubumnandi okufanele uyenze uma usePrague ifaka iBohemian Carnevale lapho uvakashela idolobha ngoFebhuwari., noma i- Umkhosi Wobhiya waseCzech lapho uvakashele ngoMeyi. Impilo yasebusuku lapha futhi iyisizathu esikhulu esenza abantu bavakashele, namaqembu e-Jazz nokunye umculo bukhoma kubusa indawo yokuzijabulisa. Umkhosi waminyaka yonke iPrague Spring International Music Festival ungomunye wemicimbi ephambili yokuzijabulisa ePrague. Ungakwazi ukujabulisa ubusuku bonke ngenxa yezokuphepha eziqinile ezungeze idolobha. Uma uthanda ubuciko nomlando, ukuvakashela eMucha Museum noma eKafka Museum kuzokukhohlisa.
5. I-European Dream Experience: Paris, France
Amathani wezimpawu zomhlaba ezidumile, amathuba okuthenga angapheli, anhlobonhlobo yokudla okumnandi, umlando ocebile, nokuqoqwa kobuciko, kanye namapaki nezingadi ezisezingeni lomhlaba zenza iParis ivelele esixukwini. Ezinye zezimpawu odinga ukuzibona okungenani kanye empilweni yakho zifaka i-Eiffel Tower, Sacred Heart Basilica, Arc de Triomphe, UMnyuziyamu waseLouvre, kanye nePalais Garnier. Uma ungumuntu othanda ukuthenga, uzothanda ukuxubha amahlombe ngamafashini aphezulu aseParis eRue Du Commerce, IBoulevard Saint Germain, nokunye ukunethezeka yezitolo ezitaladini. Futhi uma ubuthanda ubuciko, kunezinhlobonhlobo zamaqoqo obuciko azungeze iParis azosampula, kufaka phakathi uMusee dOrsay, UMusee National Picasso, noMusee du Quai Branly.
IYurophu ayikaze ishode ngamadolobha "ohla lwamabhakede" namadolobha ezivakashi. Konke kuncike kubhajethi yakho, isikhathi, nenhloso yokuvakasha. Lolu hlu luzokuvulela amasango kuphela ukuthi uhlole izindawo ezihlaba umxhwele kakhulu ezwenikazi.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukusiza ukuhlela uhambo oluya e- 5 Amazwe Aphuphile EYurophu. Uhambo lwesitimela lunqamula iYurophu lulungele ukuhamba ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Iphupho LaseYurophu: 5 Kumele Uvakashele Amazwe AseYurophu ”kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
phupha umabhebhana I-EuropeanDream KumeleVisitCountriesInEurope UkuhambaCar ukuhambahamba UkuhambaIziLo travelfrance travelitaly